शेरा प्रतिष्ठानद्वारा तीन खेलाडीलाई सम्मान - वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
शेरा प्रतिष्ठानद्वारा तीन खेलाडीलाई सम्मान
काठमाडौँ — राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विजेता बन्न सफल नुवाकोटका तीन खेलाडी सम्मानित भएका छन् । आइतबार शेरा स्मृति स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको स्वास्थ्य सचेतना तथा सम्मान कार्यक्रममा तेक्वान्दो खेलाडी संगीना वैद्य, रेस्लर कमल तामाङ (नुवाकोटे टाईगर) र रसियन अल स्पोर्ट्स हाम्किदो च्याम्पियनसीपमा कास्य पदक विजेता प्रदीप थापालाई सम्मान गरेको हो ।
तीनै जना खेलाडीलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले जनही १० हजार १ सय नगद र सम्मान पत्र प्रदान गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै सभामु्ख महराले धर्म र परम्परालाई शिक्षा र चेतनामा रुपान्तरण गर्नु समाजको अग्रगामी रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण फड्को भएको बताए ।
प्रदेश नम्बर ३ की उपसभामुख राधिका तामाङकी दिवंगत आमा राम्री तामाङको तेस्रो वार्षिकीको अवसरमा कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानको तर्फबाट नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका ३ घलेगाउँ निवासी क्यान्सरका बिरामी ६६ वर्षीय कृष्णबहादुर तामाङलाई १५ हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरिएको थियो । त्यस अवसरमा वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्रा.डा.राजेन्द्रप्रसाद बरालले क्यान्सर रोगका कारण, प्रकृति, लक्षण तथा उपचार विधिसहित बच्ने उपायका बारेमा श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्यक्रममा संघीय सांसद हितबहादुर तामाङ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवबध्वज जीसी, सहसचिव तेजबहादुर सुवेदी, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. प्रमोद यादव, शिवपुरी गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण थापा लगायतको उपस्थिति थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ २१:५९
डेंगु संक्रमित बढेको बढ्यै, २६ दिनमा ३१४ जना संक्रमित
घर गए पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङका विद्यार्थी
जेष्ठ २६, २०७६ प्रदीप मेन्याङ्बो
(सुनसरी) — डेंगु महामारी फैलिएपछि एडिज एजिप्टाइ र एडिज एल्बो पिकस जातिको मच्छरको अण्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट गर्न व्यापक रूपमा सर्च एन्ड डेस्ट्रोय अभियान जारी राखे पनि संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढेको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइतबार साँझ पाँच बजेसम्म उपचार गर्न पुगेकामध्ये ३ सय १४ जनामा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा अस्पताल सहायक निर्देशक डा. विकास साहले भने, 'पछिल्लो तीन दिनमा मात्र १०२ जना संक्रमित उपचारका लागि आएका छन् । उनीहरू सबै धरानका हुन् ।'
अत्यधिक ज्वरो आएपछि उपचारका लागि आएका १ हजार १९ जनामध्ये १ सय १४ जनामा डेंगु भाइरल भेटिएको हो । उनका अनुसार तीमध्ये २५ जना आइतबार आकस्मिक कक्षमा आएका नयाँ संक्रमित हुन् । चिकित्सकले धरानमा फैलिएको डेंगु टाइप टु भएको र एडिस एजिप्टाइ तथा एडिज एल्बो पिकस जातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट संक्रमण फैलिएको बताएका छन् ।
यसैबीच धरानस्थित पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा ६० बढी विद्यार्थी डेंगु संक्रमित भएकाले क्याम्पस प्रशासनले पाँच दिन बिदा गरेको छ । क्याम्पस प्रमुख ओमप्रकाश ढकालले भने, 'धरान-१५ र ८ मा सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् । हाम्रो क्याम्पस धरान- ८ मा पर्ने भए पनि यी दुई वडाको बीचमा पर्छ । विद्यार्थी पनि वडा १५ र वडा ८ कै घरमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने गरेकाले विद्यार्थी नै बढी संक्रमित छन् ।' उपमहानगरपालिकाले पनि यी दुवै वडालाई पाँच दिनअघि नै स्वास्थ्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।
डेंगुको महामारी फैलिएपछि क्याम्पसका सिभिल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्टि्रकल इन्जिनियरिङ, कृषि इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा अध्ययनरत विद्यार्थीले कक्षा छाडेर घर जानेक्रम बढेको छ । 'क्याम्पस आसपासमा डेंगु नियन्त्रण गर्न १९ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ,' उनले भने ।
धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा डेंगु नियन्त्रणका लागि बनेको र्‍यापिड रेस्पोन्स टिमका सदस्य रामबाबु यादवले धरानमा सर्च एन्ड डेस्ट्रोय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन थप १० वटा टोली गठन गरेको बताए । आइतबारदेखि नै धरानका विभिन्न शैक्षिक संस्थामा सचेतना अभियान चलाउन सुरु गरिएको छ ।
उनले भने, 'प्रत्येक टोलीमा बीपी कोइराला स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका इन्टर्न चिकित्सक र चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत एमबीबीएसका विद्यार्थी २ जना रहने गरी टोली गठन गरिएको छ । त्यो टोलीले स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरेर डेंगुका अण्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट गर्ने अभियान चलाउनेछ ।'
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ २१:४५
लकडाउन उल्लंघन गर्दै वाणिज्य संघले खुलाएको धादिङ बजार प्रशासनले बन्द गरायो